ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ မကြာခဏမှားတတ်ကြတဲ့ အမှား (၆)ခု - Chit MayMay
Home Lotaya ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ မကြာခဏမှားတတ်ကြတဲ့ အမှား (၆)ခု
ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ မကြာခဏမှားတတ်ကြတဲ့ အမှား (၆)ခု
ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ မကြာခဏ အများဆုံးမှားတတ်ကြတဲ့ အမှားတွေကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းက သင့်အား မိဘကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
မိဘအများစုက ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်မှုနှင့် ပတ်သတ်လာတဲ့အခါ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ မလုံခြုံမှုကို ခံစားကြရပါတယ်။ ဒါကသူတို့ကို အကောင်းဆုံး လမ်းညွန်မှုနှင့် ဆုံးမမှုကို ဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာ သေချာမသိတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေ မကြာခဏ အမေးအများဆုံးမေးခွန်းကတော့ ကလေးကို ကျွန်မစကားနားထောင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? သူတို့ကို ဆုံးမတဲ့နေရာမှာ အာဏာရှင်သိပ်ဆန်လွန်းနေသလား ဒါမှမဟုတ် အရမ်းပျော့လွန်း၊ တင်းကျပ်လွန်းနေလို့လား?
ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ မကြာခဏမှားတတ်ကြတဲ့ အမှားများ
သင့်ကလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ မလုပ်သင့်တဲ့ အမှားတွေကို သိထားတာက အသုံးဝင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီကြိုတင်ကာကွယ်မှုများက သင့်ကို စိတ်ခံစားမှုဒဏ်ရာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှ တားဆီး ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကလေးဟာ လမ်းညွန် (သို့) လိုက်နာဖို့ စံနမူနာမရှိဘဲ မကြီးပြင်းနိုင်ဘူးဆိုတာ သတိရပါ။
၁။ authority မှာ ကွာဟချက်ရှိတာ
မိဘအုပ်ထိန်းမှုမှာ အကြီးမားဆုံး အမှားတစ်ခုက ကလေးအတွက် စံနှုန်းကို တသတ်မတ်တည်း မမျှဝေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးဟာ အမေက တစ်မျိုးပြောလိုက်၊ အဖေကတစ်မျိုးပြောလိုက်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် မက်ဆေ့ချ်ကို လက်ခံရရှိမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့စကားကို နားထောင်ရမလဲဆိုတာ သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းညွှန်းဆိုခြင်း မရှိဘဲ မျက်စိလည် လမ်းပျောက်သလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
သင်နဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ စုစည်းထားတဲ့ မက်ဆေ့ချ် မရှိဘူးဆိုရင် “ငါတို့နောက်မှ စကားပြောမယ်” “ပြီးမှ အဖြေတစ်ခုပေးရမယ်” ကဲ့သို့ တစ်ခုခုကို ပြောတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါက မိသားစုဟာ အခိုင်အမာကိုယ်စားပြုကြောင်းနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ယူနစ်ကို ဖော်ပြဖို့လည်း ကူညီပေးပါတယ်။
မိဘတွေဟာ ကလေးတွေကို သွန်သင်ဆုံးမတဲ့အခါ စိတ်ကို လွှမ်းမိုးခွင့်မပြုသင့်ပါဘူး။ တနည်းအားဖြင့် သင်စိတ်ပျော်နေတဲ့အခါ၊ စိတ်ဆိုးနေ သို့မဟုတ် ပင်ပန်းနေတဲ့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ကလေးကို ပြုမှုဖို့ လက်မခံသင့်ပါဘူး။
ဒီလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင် ကလေးဟာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ မက်ဆေ့ချ်ကို ရရှိပါတယ်။ မိဘတွေဟာ ကလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ တရားမျှတပြီး ဆင်ခြင်တုံတရား ဆက်ရှိနေဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ သတိရသင့်ပါတယ်။
၃။ ကလေးကို နှိမ်တဲ့စကားလုံးတွေ အသုံးပြုခြင်း
မိဘတစ်ချို့ဟာ ကလေးတွေကို လေးစားမှုမရှိတဲ့ စကားလုံးတွေ ပြောကြပါတယ်။ ဥပမာ – “နင်ဒါကိုချိုးဖောက်တော့မယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်” (သို့) “နင်က ငါ့ကိုအမြဲတမ်းစိတ်ပျက်စေတယ်” ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းများ သုံးမိနိုင်ပါတယ်။
၄။ မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ ကတိများ
မိဘတွေဟာ လက်ဆောင်တွေ၊ ဆုတွေ ပေးမယ်လို့ပြောပြီး မရဘူးဆိုရင်၊ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ သဘောတူညီချက်အဆုံးကို အတည်မပြုပေးရင် ကလေးတွေ စိတ်ဓါတ်ကျပြီး စိတ်ပျက်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့် မိဘတွေဟာ ကလေးတွေအား ကျောင်းတာဝန်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်၊ အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ရန် ကလေး အားတတ်စေဖို့အတွက် ဆုပေးစနစ်ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် ကလေးက ပန်းတိုင်ရောက်သွားတဲ့အခါ မိဘက ကတိပေးထားတဲ့ဆုကို မပေးတော့ပါဘူး။ လူကြီးတွေအနေနဲ့ ဆုလာဘ်တွေ ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါ လက်တွေ့ကျရမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ကတိကို ဖြည့်ပေးရပါမယ်။
၅။ ကလေးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းလိုနေခြင်း
မိဘတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပြည့်စုံရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ကလေးကို သူငယ်ချင်းတွေလို ဆက်ဆံတာက မှားပါတယ်။ မိဘမှာ သြဇာညောင်းတဲ့သွင်ပြင် ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မိဘဟာ မျှတတဲ့ ဆက်ဆံမှုနှင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုရဲ့ မူဘောင်ထဲမှာ အမြဲတမ်းလည်ပတ်နေသင့်ပါတယ်။
၆။ အဆုံးအမက ရှေ့နောက်မညီခြင်း
ယေဘုယျအားဖြင့် မိဘတွေဟာ မိမိတို့ကလေးတွေကို မကောင်းတာ မလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုကြပါတယ်။ သို့သော် ကလေးတွေက သူတိုမိဘတွေ မကောင်းတဲ့အရာတွေ ပြုလုပ်နေတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ရှေ့နောက်မညီတဲ့ အပြုအမှုတွေက ကလေးအား ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ ဥပမာတစ်ခု ချမှတ်ခြင်းဟာ မိဘရဲ့ သြဇာအာဏာ တရားဝင်ဖြစ်ခြင်းကိုလည်း လျော့ကျစေပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ စွမ်းအားကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များ
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ မကြာခဏလုပ်မိကြတဲ့ အမှားတွေကို မလုပ်မိစေဖို့ သင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ အကြံဉာဏ်အချို့ကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ ထားပါ။
ကလေးတွေအတွက် တသမတ်တည်းဖြစ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေ၊ အမိန့်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။
independence နှင့် သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လွယ်ကူ ချောမွေ့စေတာကြောင့် ကလေးတွေအား သူတို့လုပ်ရပ်တွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ခံစားခွင့်ပြုပါ။
သူတို့အသက်အရွယ်အလိုက် အိမ်မှုကိစ္စတွေ ပေးပါ။
ရေရှည်မှာ မကောင်းသော အပြုအမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့် မလိုလားအပ်သော အပြုအမှုတွေကို ခွင့်မပြုပါနဲ့။
အတိုချုပ်ပြောရရင် ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ မကြာခဏ အမှားတွေလုပ်မိခြင်းက လူကြီးဘဝအထိ ဆက်ဖြစ်စေတဲ့ အပြုအမှုဆိုးတွေကို ဦးတည်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်များတဲ့ အမှားတွေကို ရှောင်ရှားပြီး သင့်ကလေးတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဖြင့် ပျိုးထောင်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleသင့်ရဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသား သားသမီးတွေက သင့်ကို မနှစ်သက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၇)ချက်
Next articleသင့်ကလေးကို ပိုမိုတင်းကြပ်သင့်ကြောင်း ပြသနေတဲ့ လက္ခဏာ (၅) ချက်